Fitsidihana arak'asa nandraisana ny delegasiona avy amin'ny COI | Primature
Fitsidihana arak’asa nandraisana ny delegasiona avy amin’ny COI
Mahazoarivo, ny 13 mey 2022 – Manatanteraka iraka ho fakan-kevitra amin’ireo firenena mikambana ao anatiny ny “Commission de l’Océan Indien – COI” ho fanomanana sy fandrafetana ny drafi-pampandrosoana stratejika ho an’ny faritry ny Ranomasimbe Indianina. Mandalo eto Madagasikara ny Sekretera jeneraliny, ary nifanakalo hevitra tamin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta Ntsay Christian androany ireo delegasiaona ireo.
Noresahana nandritra izao fihaonana izao ny asa efa vita sy ireo mbola miandry amin’ity taona ity, ny asa fampandrosoana ny firenena mpikambana ary ireo laharam-pahamehan’i Madagasikara, izay filohan’ny vondrona, amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny.
Nilaza ny Filohan’ny COI fa laharam-pahamehana amin’ity taona ity ny fijerena akaiky ny lafiny fiarovna ny sisin-tany sy ny fivezivezena an-dranomasina, ny fanjariana ara-tsakafo ary ny fanarenana ny lafiny ara-toekarena amin’ny faritra misy antsika.
Iaraha-mahalala anefa fa nitarika ny fiakaran’ny vidim-piainana ny fiantraikan’ny COVID sy ny zava-misy maneran-tany. Nosinganin’ny Praiministra ny tokony hananana fomba fijery lavitr’ezaka mba hahafahan’ny firenena mivondrona ato amin’ny Ranomasimbe Indianina manana ny anjara toerany manoloana izany fiovana izany.
← Fitsidihan’ny AUF teto amin’ny lapan’i Mahazoarivo
Arsevekan’i Seychelles sy ny Ranomasimbe Indiana →